Kooraska Windos-ka - Hoyga Aqoonta
Waxaa la qoray : [ 11-03-2011 ]
Kooraska baro Windos-ka
Fidinta aqoontu waa mid waajib ku ah qof walba wuxuu yaqaan.
Maanta waxaan idiin soo bandhigayaa kooras ah Windows.
Waxaanan ilaahay ka baryayaa inuu ila garab galo.
Sidaad ula socotaanba nadaamyada shida kumbiyuutarka ama mishiinka aynu adeegsanno hadda oo uu shido waxa loo yaqaan Windows.
Waxaa ugu horreeyey (Dos) Doos-kaas oo ahaa shaashad madow wax walbana gacanta lagu qori jiray.
waxaa ku xigay Windows (3.11) Window (95) . Windows(98)
Windows (Me). Windows (Xp) Windows (Vista) Windows (7) iyo Windows loo yaqaan (2003)loona adeegsado (Server) iwm.
Hadda waxaynu baranaynaa waa Window (Xp) oo badanaa dadku aad u'adeegsadaan looguna jecelyahay.
Windows waxay u dhigantaa Af Soomaali (Dariishado/Daaqado)
Markaad guri ama aqol dariishadda ka soo eegto waxaa kuu muuqanaya siduu gurigu u yaal sida, sariirtu meeshay ka taal,hadduu kursi dhex yaal iwm.
Hadal iyo dhammaantii waa Dariishado. Iga raalli ahow akhristaha qiimaha lahow mid baan kuu sheegayaa, Mouse-ka (Jiirka) labada farood ee la saaro adduunku wuxuu u kala yaqaannaa (farta midig iyo farta bidix) Faraha la saarona waa farta loo yaqaan murdiso ama farta suulka ku xigta (Taasna waa farta bidix) Farta dhexe waxaa loo yaqaan (Farta Midig) (Left Click right click)
Liiskaas hoose waxaa loo yaqaan (Task bar) ama Sugitaan wixii aad shiddaana way ku sugayaan bay ka dhigantahay.Sawirka eeg.
Eeg markaad bog internet furtidba meeshaasuu dhigmayaa markaasaad ku kale u wareegaysaa, iftiinkaa ku yaraanaya kii aad horay ugu shaqaynaysay. Marba kaad ku shaqaynayso ayaa iftiin leh.
Dhanka midigta xiga waxaa ku muuqda Saacadda,barnaamijka Vayruska,Codka meesha laga dheereeyo,iyo Maasinjerka,badanaana waxaa halkaa ku soo baxa barnaamijyada kumbiyuutarku markuu shidmo la shidma. Taana mar kale ayaynu ka hadlaynaa. inshaa'allaah
Howlo badan bay leedahaye mid mid aynu u galno.
Start waxaa lagu koobaa wixii kumbiyuutarka barnaamij ah oo kuugu jira iwm.
Markaad farta bidix ku dhufatid bay kuu soo baxayaan intaas oo ikhtiyaar.
Mid mid aynu uga sheekayno.
( Log off ) Markaad riixdid wuxuu ku siinayaa labo ikhtiyaar
(Switch user) iyo ( Log off )
Switch User waa markaad ku isticmaashaan kumbiyuutarka dhowr qof baa qof walba goobtiisii galayaa.
Log off-na ma wada demayo balse wixii aadan kaydin baa lumaya oo haddaad howl wadday meel fiican kuu maraysay sida, adoo wax qorayey wixii waa lumayaan.
Ikhtiyaarka ku xiga waa ( Turn off the computer )
Marka ikhtiyaarkani wuxuu ku siinayaa saddex ikhtiyaar.
( Stand by ) ( Turn off ) ( Reset )
Stand by Marka la adeegsado shaashadda ayuu kuu deminayaa sida qof soo noqonaya oo kale howshii aad waddayna sideedii iyada oo ah baad ugu soo noqon. Hadduu kumbiyuutarku yahay laabtoob markaad shaashadda furtid baad taaban galuuska/badhanka laga shido. Hadduu yahay Desktop (Kumbiyuutar gurina ) sidoo kale.
Turn off wuxuu deminayaa kumbiyuutarka oo dhan wixii aadan kaydinna way u badantahay inuu ku weydiiyo kaydintooda.
Reset ama Restart
Hadba kii kuugu jira kumbiyuutarkay soo shidayaan.
Kaalinta koowaadi hadda waa (All Programs ) ama Program hadba kii kuugu jira meel kale ayaynu ku baran sida looga beddelo'e.
All Programs ama Programs waxaa kuugu jira waxa barnaamij kumbiyuutarka kuugu jira oo dhan kuwa aad gelisay ama kuwa ku yimaadaba.
Taasina waa howl fududayn.
Recent Documents Ama Documents
Halkaa waxaa gala warqadihii ama sawirradii ugu danbeeyey ee markaa fiirsanaysay ama aad qoraysay... Waana sida ugu fudud ee lagu heli karo.
Sida loo beddelo Start habkay u soo baxayso.
Marka hore Mouse-ka (Jiirka) u gee Start... Farta midig ku dhufo ama far dhexada
waxaa kuu soo baxaya ikhtiyaarro aad (Properties)
Farta Bidix markaa ku dhufo markaad korkeeda geysid.
Markaa waxaa kugu soo baxaya liis kale
Haddii wareeggu yahay (Start Menu) tan hore oo aad rabto
(Classic Start Menu) waxa keliya oo aad samaynaysaa dhibicda dhexda ku jirta tan kale u gee,markaana (Apply) Riix (Ok)-na ku xiji.
Mowduucii hore : Kooraska Windos-ka -||- Ka soo jeeda: -||- Qoraaga: Halyeyga Afrika
Sida loo beddelo sawir danbeedka shaashadda.
Marka hore (Mouse)-ka meel bannaan oo shaashadda ka mid ah saar
markaa farta midig riix,waxaa kuu soo baxaya ikhtiyaarro tan ugu hoosaysa farta bidix ku riix (Properties)
markaa waxaa kuu soo baxaya shaashad, intaan ka rabno hadda waa meesha ay ku qorantahay (Desktop) ee sare. Markaa wuxuu ku siin ikhtiyaarro kale oo hoose sawirka aad rabto marka aad dhammaysona riix Apply ama Ok
Waxaa halkan ku jira oo kale markaad kumbiyuutarka sida 5 daqiiqadood ka maqnaatoba inuu sameeyo Shaashad ilaalin ama (Screen Saver)
Riix (Screen Saver) oo ku'ag taalla Desktop.
Markaad howl walba dhammaysoba Fadlan ha'illaawin Ok ama marka hore Apply
Waxaa la qoray : [ 13-03-2011 ]
Weli duruustii Windows-ka ayaynu wadnaaye.
Dariskani waa (Desktop)
Waana shaashadda aad wax ku aragto iyo waxa saaran.
Miiska korkiisu waxaa lagu samayn karaa waxyaabo badan
1- Faylashaa lagu hal'abuuri karaa
2- Galalkaa lagu hal'abuuri karaa.
3- Sawirradaa la saaran karaa
iyo howlo kale.
B = Ku hal'abuurka fayl Miiska
(Waxaad dhigaysaa Jiirka meel bannaan markaasaad riixaysaa farta midig)
saf dheer ayaa kuu soo baxaya hoos u deg oo ku riix farta bidix
meesha ay ku qorantahay
Sidanna wuu kuugu soo baxayaa markaana magaca aad la rabto ku qor markaba aad la rabto.
hadda hal'abuur fayl aad wax ku qori karto kaydsanna karto.
midigta ku dhufo markaa tag New ku xiji Wordpad document
markaana magaca ku qor.
Labo siyaaboodba faylka galka hadda waad ugu ridi kartaa adigoo jiida,ama adigoo inta faylka furtid oo markaad wax ku qortid ku ilaalin kara galkaaga.
Hadda faylka fur waxaad doontona ku qor markaana codso inaad kaydiso adoo aadaya Fayl
Habka jiididdu waa hab kuu dhib yaraynaya intaad mashaqo iyo dhib mari lahayd.
Mouse-ka (Jiirka) ayaad saaraysaa faylka aad rabto inaad jiiddo farta bidix ku dhufo markaa oo haka qaadin, markaana jiid illaa aad u geyneyso galka. Hadhowna sii daa toos buu u galayaa.
Ogaada duruustu waa inoo socotaa inta itaalkay ahna waan soo diyaarin,ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu ila garab galo....
Naq Kooraska Windos-ka
Waa deris dadku hadday qiimihiisa yaqaannaan
aan aqoonta u lahayn windowska maalin walba way furi
Jawaabta: Kooraska Windos-ka
Waxaa la qoray : [ 03-08-2012 ]
maasha'alaah waad mahadsantahay halyeeyga